Madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasiin u magacaabay xil muhiim u ah Madaxtooyada villa Soomaaliya – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasiin u magacaabay xil muhiim u ah Madaxtooyada villa Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasiin u magacaabay xil muhiim u ah Madaxtooyada villa Soomaaliya
Editor August 16, 2018 0
Muqdisho (Madal Furan) – Agaasimihii hore ee Madaxtooyada Villa Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa loo magacaabay Ku xigeenka Hay’adda NISA ee Sirdoonka Qaranka, waxaana booskii Agaasimaha Guud ee Madaxtooyadda loo magacaabay gabar lagu magacaabo Aamina Siciid Cali.
Arrintan ayaa imaaneysa xili uu Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo uu isbedelo muuqda ka dhex sameeyey Hay’adda NISA oo toddobaadyadii la soo dhaafay looga shakiyey masuuliyiin ka tirsanaa hay’adaas inay xiriir dhow la leeyihiin ururka Al-shabaab, arrintaasina ay dhalisay in sirta dowladdu aysan noqon mid xafidan.
Saxaafadda gudaha Soomaaliya ayaa horaantii sanadkan wax badan ka qortay in Fahad Yaasiin oo ahaa xubin firfircoon marka laga hadlayo dhexgalka arrimaha Madaxtooyadda Villa Soomaaliya iyo weliba isagoo si weyn dhegeaha Madaxweyne maqalka Farmaajo u nuglaayeen balse uu mudo raacdeynayey sidii loogu magacaabi lahaa Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Qaranka.
Fahad Yaasiin ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa ninkii ku dhaliyey Madaxweyne Farmaajo inuu meel dhexe ka istaago khilaafka dowladdaha Khaliijka u dhexeeya, isla markaasna wuxuu kaloo raad muuqda ku yeeshay soo xero gelinta dowladda Qadar ee gudaha Soomaaliya.
Dowladda Qadar ayaa Madaxweyne Farmaajo ku tegay booqashooyin wixii ka danbeeyey khilaafkii dowladdaha Khaliijka, iyadoo Qadar ay bixisay mashaariic ka badan 200 Milyan oo Doolar oo wax looga qabanayo wadooyinka burburay ee Labad Shabeelle.
Arrintu siday doonto ha ahaayee, Magacaabista Madaxweyne Farmaajo uu Fahad Yaasiin ayaa xiligan u muuqaneysa in Madaxtooyadda Villa Soomaalliya go’aansatay inay dhexda u fariisto hay’adda Sirdoonka Qaranka si ay u sahlanaato in Xukuumaddu hesho sir xafidan,
Daabacaada Sh.So. oo shuruudo adag lagu xiray
Toogashadii masjidka New Zealand: Ninka falka loo heysto oo dood kale abuuray